Martisoor: Dr. Saadiq Enow iyo Taariikhda Soomaalida (dhegayso) – Radio Daljir
Martisoor: Dr. Saadiq Enow iyo Taariikhda Soomaalida (dhegayso)
Seteembar 14, 2017 9:55 b 0
Barnaamijka Martisoor ee Radio Daljir ee todobaadkan iyo dhowrka todobaad ee soo socdaba waxaan idiinku soo gudbin doonaa xog ballaaran oo la xiriirta taariikhda Somalida, ee dhageystow makula tahay in qoomiyadda Somalidu ay jirtay in ka badan 2 million oo sano?
Sidaas waxaa sheegaya Qoraaga Dr. Saadir Enow oo ka mid ah ku xeeldheereyaasha taariikhda caalamka, wax badanna ka qoray taariikhda Geeska Afrika gaar ahaan tan Soomaalida.
Dr. Saadiq Enow oo mar soo noqday wasiirka caafimaadka ee PL waxaa kale oo uu ka hadlayaa qaar ka mid ah marxaladihii kala duwanaa ee ay Soomaalidu soo martay wakhtigaas dheer ee ay jirtay ee la xiriiray dhinacyada nolosha iyo xiriirkii ay la lahayd dunida inteeda kale.
Wakhti dheer oo uu ku hawlanaa cilmi baaristan ku saabsan taariikhda ka dib, ayuu Dr. Enow barnaamijkan ku qabtay goob waxbarasho oo ay Soomaalidu ku leeyihiin dalka Maraykanka lana yiraahdo Abu-bakar Sadiiq Islaamic Center.
Hoos ka dhegayso barnaamijka Martisoor ee maanta.